IHuawei igqithe i-Samsung okokuqala njengomthengisi omkhulu we-smartphone emhlabeni IPhone iindaba
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, intloko yeHuawei yathi inkampani ayiqhubayo ingangowona mvelisi mkhulu we-smartphone emhlabeni. Kodwa akazange abalekele ukubethwa ngurhulumente waseMelika ngokumphendula ngokuvota kwaye engamvumeli ukuba asebenzise isoftware okanye izixhobo eziyilelwe eUnited States.
Kwiinyanga ezimbalwa kamva, inkampani yasungula iflegi yayo yokuqala, ngaphandle kweenkonzo zikaGoogle. Iselfowuni ilunge kakhulu, yonke into iyamangalisa kwihlabathi lokufota kunye nayo yonke into oyifunayo, kodwa ayinazo iinkonzo zikaGoogle, ke, kubasebenzisi abaninzi, Kufana nekhamera yedijithali eyomileyo.
Ngaphandle kokuhla okubukhali kwintengiso kuye kwahlupheka kuzo zonke iimarike, ikratshi lokuthand 'izwe lamaTshayina, ivumele inkampani ukuba iqhubeke nokuzibeka njengomnye wabavelisi abathengisa ezona smartphones. Kunyaka ophelileyo, ngaphambi kokuvalwa kukarhulumente waseMelika, yayisele igqithile iApple njengomenzi wesibini ngobukhulu we-smartphone.
Ngokwabafana abavela eCanalys, IHuawei iyigqithile iSamsung Kule kota yesibini yonyaka, ukuthengisa ii-smartphones ezizizigidi ezingama-55,8 kwizigidi ezingama-53,7 zeSamsung. Kwakhona, uHuawei uthathe ithuba lokutsala ukuthanda ilizwe kwilizwe lakhe ngenxa yohambo oluqhubekayo olufika luvela eUnited States.
Isamsung, njengabanye abavelisi abanjengoApple, bahlupheke kule kota yesibini ngenxa yobhubhane kubangelwe yi-coronavirus, kuba ukuthengisa kwehle kakhulu, into engakhange yenzeke e-China, kuba yayilelinye lamazwe okuqala ukulawula kunye nokusoyisa esi sifo.
Ukuqinisekisa ukuba iHuawei iyifumene ngokwenene i-Samsung, Kuya kufuneka silinde ukubona ukuba ithini ingxelo ye-IDC, omnye wabahlalutyi ukuba ikota nganye ipapasha ingxelo ngentengiso ye-smartphone kwihlabathi liphela. Isamsung, njengeApple, sinethemba lokuba ngoku sibuyela kule intsha ukulingana, amanani okuthengisa ii-smartphone abuyele esiqhelweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Ukhuphiswano » IHuawei igqithe i-Samsung okokuqala njengomthengisi omkhulu we-smartphone emhlabeni